Amahlathi njengengcezu esemqoka ekulweni nokuguquka kwesimo sezulu | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Amahlathi njengengcezu esemqoka ekulweni nokuguquka kwesimo sezulu
Izihlahla namahlathi kubalulekile ukulwa nokuguquka kwesimo sezulu. Ukumuncwa kwe-CO2 nge-photosynthesis kuyasisiza ukunciphisa inani lamagesi abamba ukushisa emkhathini futhi ngenxa yalokho sikwazi ukufaka isandla ukuze amazinga okushisa anganyuki.
Ngemuva kweNgqungquthela Yesimo Sezulu kanye neSivumelwano SaseParis, sekwenziwe umkhawulo wokukhishwa kwegesi engcolisa ukushisa ukuze kuncishiswe imiphumela yokuguquka kwesimo sezulu. Yebo, ihlathi laseSpain, elihlala ngaphezu kwengxenye yobuso bezwe, kuyisihluthulelo sokukwazi ukufeza lezi zibopho.
1 Ukubaluleka kobukhulu behlathi
2 Izinhloso zesivumelwano saseParis
3 Ukongiwa kwamahlathi
Ukubaluleka kobukhulu behlathi
Selokhu kwabekwa imigomo yokuguqulwa kwesimo sezulu, amahlathi abe yinto ebalulekile futhi adlala indima ephambili ekusimameni. Zilithuluzi eliwusizo kakhulu ekulweni nokuguquka kwesimo sezulu njengoba zibalulekile amasinki ekhabhoni.
Njalo ngonyaka amahlathi amakhulu basetha ngaphezu kwe-24% yokukhishwa okuphelele kwe-CO2 okukhiqizwa eSpain. Ngakho-ke ukubaluleka kokwandisa indawo enokhuni nokuthuthukisa ikhwalithi yaleyo ekhona. Ukwehla kwamahlathi ngenxa yemililo ephindaphindayo noma ukwanda okukhulu kwamazinga okushisa kuzoba nomthelela obulalayo mayelana nokukhishwa kwegesi ekhipha ukushisa, kunciphisa futhi kuqede amandla okunciphisa abantu basehlathini. Ngakho-ke, ukunakekelwa kahle kufana nokuphathwa okuhle kwemvelo.
Izinhloso zesivumelwano saseParis
Izinhloso zesivumelwano saseParis iSpain eyasigcina ngoNovemba 30 zifinyelela ekwehliseni ukukhishwa kwegesi engcolisa umoya Ama-26% ngo-2030 kuleyo mikhakha esakazekayo (njengezokuthutha, ezolimo, imfucuza noma izakhiwo) kanye nama-43% alokho okungcolisa okuhambisana nomkhakha wezimboni. Izisi kufanele zingancishiswa maqondana namazinga angcolisayo ayekhona ngo-2005.
Ukuze kufezwe izinhloso ezibekwe Yisivumelwano SaseParis, izihlahla zidlala indima ebaluleke kakhulu njengosinki wekhabhoni. Ngenxa yabo, siyakwazi ukunciphisa inani le-CO2 emkhathini. Kodwa-ke, ngenxa yokuntuleka kokuphathwa noma imali engenayo, amahlathi ayashiywa nsuku zonke futhi awanakekelwa ngokwanele ukuvimbela imililo yehlathi, akhuthaze ukulinganiswa kwemvelo futhi asize ukongiwa kwemvelo. Kufanele sikhumbule ukuthi intaba iyasimama ngenxa yokuphathwa kwayo kwezemvelo, kwezenhlalo nakwezomnotho.
Ngokwe-Spanish Association for Forest Sustainability (PEFC), izihlahla zingayithuthukisa impilo yamadolobha, ngoba zibekwe ngendlela efanele Iyakwazi ukupholisa umoya phakathi kuka-2 no-8 degrees centigrade. Ngaphezu kwalokho, amahlathi ahlinzeka ngokhuni olusinikeza amandla amakhulu kunelanga, amanzi noma umoya, akha ama-40% wamandla wamandla avuselelekayo njengamanje emhlabeni.
Ngokusho kwenhlangano yezemvelo i-WWF, njengamanje izingxenye ezimbili kwezintathu zamahlathi eplanethi zilahlekile eminyakeni eyizi-10.000 XNUMX edlule. Lo mkhuba uqhubeka ngenxa yokugawulwa kwemithi ngokungemthetho kanye nokuguquka kwawo kwezolimo olunzulu. Inhlangano yezemvelo incoma ukwenza uhlu oluhle lwezinsizakusebenza zehlathi, ukwehlukahlukana kwazo kanye nemiphumela yazo emphakathini ukuze izenzo ehlathini zingabeki ikusasa lazo engcupheni, "kubhekwe ubukhulu bezemvelo, bezenhlalo nezomnotho."
Kodwa-ke, i-panorama yaseSpain ingenye indaba. Lapha akukho ukuphathwa kwehlathi okunenzuzoNjengoba ingekho imakethe yemikhiqizo ekhishwe ehlathini, incane kakhulu noma inamanani aphansi kakhulu.
Futhi, i-WWF ibheka njengokusemqoka ukwakhiwa kwezindikimba zokweluleka kanye nokubamba iqhaza komphakathi ngokulingana kwabo bonke abenzeli abanentshisekelo emahlathini ngokubuka kwezemvelo, kwezenhlalo nakwezomnotho.
Njengoba ukwazi ukubona, ukulwa nokuguquka kwesimo sezulu kunomlingani omkhulu wayo, ngisho naseSpain, akubhekwa kangako.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Amahlathi njengengcezu esemqoka ekulweni nokuguquka kwesimo sezulu
Ungayikhetha kanjani indawo yokubala?
Yini iMeteor Shower?